iPhone Ringer Isiri Kushanda? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa! [Nhungamiro] - Iphone
ipad wont rega ndigadzirise maapplication
iphone yako apple id yakaremara
apple music muedzo usingashande
iphone 6s yekukanganisa mvura kukuvara
iPhone Ringer Isiri Kushanda? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Kana iwe uchigara uchifamba kana wakanyanya kubatikana mukati mezuva rese, iwe unoziva kukosha kwekunzwa mameseji uye mafoni pavanouya kuburikidza. Zvisinei, kunyange zvazvo iwe wakapetwa kaviri kuti uone kuti ringer yako iri, iwe uchiri kushaya mafoni! Muchikamu chino, Ini ndichatsanangura zvekuita kana yako iPhone ringer isiri kushanda!
Kutanga, Tarisa Iwo Basics
Kunyangwe izvi zvingaite kunge zvisina-bhuroka, tarisa kuti uve nechokwadi chekuti Ringi / Chinyararire switch parutivi rwe iPhone yako inodhonzwa yakatarisana. Kana ikasundirwa kumashure, yako iPhone inoiswa pane yakanyarara. Dhonza iyo kumberi kuti umise kuti iridze.
Paunenge iwe uine chokwadi chekuti yakaiswa kurira, ita shuwa kuti vhoriyamu yakakwidzwa. Iwe unogona kuita izvi muZvirongwa kana nekushandisa mabhatani evhorumu padivi re iPhone yako.
Kana iwe uchida kushandisa mabhatani evhorumu kugadzirisa vhoriyamu, ita shuwa kuti vhoriyamu bhawa inouya pachiratidziri inoti Anonzwika paunoadzvanya. Kana ichiti Vhoriyamu , musoro kuZvirongwa kugadzirisa iyo ringer vhoriyamu.
Enda ku Zvirongwa .
Tinya pane Inzwi & Haptics .
Ita chokwadi ' Chinja nemabhatani ”Yakavhurwa.
Unogona kushandisa vhoriyamu bhaa pachiratidziro kugadzirisa ringer vhoriyamu kana vhoriyamu mabhatani izvozvi.
Kana ringer yako yakavhurika, asi Usakanganise yakavhurwa zvakare, haugamuchire notisi dzekufona kana zvinyorwa. Nzira iri nyore yekuziva kana yako iPhone iri mune Usakanganise modhi ndeyokutsvaga mwedzi mukona yekurudyi-kona yekona.
Kana iwe uine iPhone X kana nyowani, iwe uchazoziva ona mwedzi icon paunovhura Control Center.
Kudzima Usakanganise, vhura Zvirongwa uye pombi Usakanganise. Kana switch yacho yakavhurwa senge pamusoro, Usakanganise iriko. Unogona kubaya switch kuti uidzime.
Iwe unogona zvakare kudzima Usakanganise muDhivha Center nekutepa pane iyo mwedzi icon. Iwe uchaziva kuti Usakanganise iripo kana iyo icon yakavhenekerwa muDirect Center.
Dzinga Kubva kuBluetooth
Zvinogoneka kuti yako iPhone yakabatana neBluetooth mudziyo uye kuti mafoni ako uye zvinyorwa zviri kurira ipapo. Kuti ubvise iyo, ita izvi:
Tinya Makaralı .
Tarisa uone kana iwe wakabatana kune chero zvigadzirwa.
Kana iwe uri, tinya pabhuruu ini kurudyi kwayo.
Tinya Dzinga .
Kana pasina chimwe chezvataurwa pamusoro apa chakakushandira, ngatiedzei kugadzirisa zvese zvigadziriso. Izvi zvinogadzirisazve zvese zviri muZvirongwa app kudzokera kune zvakasarudzika zvefekitori, izvo zvinowanzo gadzirisa yakadzika software nyaya. Kuti uite izvi, tevera iyi rairo:
Mupumburu pasi uye vawane Dzorera zvakare .
iPhone Kugadzirisa Sarudzo
Kana kunyangwe izvi zvikasashanda, unogona kuve nedambudziko rakakura pamaoko ako. Tarisa uone chinyorwa chedu pane chii chaunoita kana wako iPhone mutauri akamira kushanda kana maitiro ekugadzirisa iyo iPhone iyo yakanamatira mune headphone mode .
Kana chiri chinhu chakakomba, ungatofanira kuenda nacho kuApple kuti chigadziriswe. Iwe unogona kuita musangano kune yako padyo Apple Genius Bhawa . Imwe huru iPhone yekugadzirisa sarudzo ndeye Pulse , kambani ichatumira tekinoroji yakaziviswa yakananga kwauri!
Kana iwe uine yekare iPhone ine yakaputsika mutauri, ungangoda kufunga nezvekuvandudza. Nyowani iPhones dzine anoshamisa stereo speaker. Tarisa uone iyo UpPhone yekuenzanisa chishandiso kuenzanisa mafoni achangoburwa!
Unogona Kunzwa Ini Zvino?
Ndinovimba, ikozvino zvawasvika kumagumo kwechinyorwa ichi, yako iPhone ringer iri kushanda zvakare! Iwe hauzombopotsa imwe yakakosha kufona kana kutumira mameseji zvakare. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo, inzwa wakasununguka kuvasiya mune zvakataurwa pazasi!